November 14, 2020 - समृद्ध नेपाल
न्दी नेपालिहरुको दोश्रो ठूलो चाडको रुपमा रहेको तिहारको आज अर्थात सनिवार तेस्रो दिन । हिन्दु नेपालीहरुले घरघरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरेका छन् । यस्तैमा नेपाली कलाकारहरुको लक्ष्मी पुजाको रौनक पनि राम्रै देखिएको छ । पुजा शर्मा करिष्मा मानन्धर केकि अधिकारीप्रकृति श्रेष्ठ प्रमोद खरेलसुनिल थापा सुहाना थापा लगायतले लक्ष्मी पुजा पश्चात् तस्वीरलाई सामाजिक संजालमा साझेदार
उदयपुरको मैनामैनीमा बिजुली बलेसँगै बेलकाको सबै वडा झिलिमिलि !
उदयपुरको बेलका नगरपालिका ७मैनामैनीमा बिजुली बत्ति बलेसँगै नगरपालिकाको सबै वडा झिलिमिलि भएको छ । बर्षौदेखि अन्धकारमा रहेको वडाको बस्तिहरुमा शुक्रबार साँझबाट बिजुली बत्ती बल्न थालेपछि नगरपालिकाको सबै बस्तिहरु भिलिमिलि भएको हो नगरपालिका भित्र ९वटा वडा रहेका छन् वडामा नेपाल सरकारको ९०प्रतिसत रकम रहेको १२करोड ६०लाख र स्थानिय बेलका नगरपालिकाको १०प्रतिसत बरावरको रकम रहेको एक करोड
आज लक्ष्मी पूजाको दिन कतै तपाइले गर्नु भएन यी गल्ति पुरा जन्नुहोस !
लक्ष्मीपूजाको दिन बिहान सबेरै उठ्नुहोस् । छिटो उठेर सरसफाइ सहित पूजापाठ गर्नुहोस् ।२लक्ष्मीपूजाको दिन नङ काट्नु हुँदैन । साथै दाह्री वा कपाल पनि काट्नु हुँदैन ।३पूजा गर्ने स्थलमा क्रमशबायाँबाट दायाँतर्फ भगवान गणेश लक्ष्मी विष्णु सरस्वती र कालीको मूर्ति राख्नुपर्दछ । त्यसपछि लक्ष्मण, राम र सीताको मुर्ति राखेर पूजा गर्नुपर्छ । ४लक्ष्मीपूजाको दिन उपहार दिन जाँदा
अस्पतालको पेटिमा गर्भवती प्रसव पिडाले चिच्याउँदै छटपटाउँदा पनि अस्पतालले भर्ना लिएन, यसरी सडकमै जन्मियो बच्चा !
कोरोनाका कारण अहिले अन्य रोगका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमै गर्भावस्थामा ज्यान गुमाउने आमाहरुको संख्या पनि अन्य अवस्थामा भन्दा बढी छ । यस्तै अवस्था भारतमा पनि छ । कोरोनाका कारण अस्पतालले अन्य रोगका विरामीको पनि भर्ना लिन नमान्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ कोरोनाको रिपोर्ट नआउँदा सम्म चिकित्सक विरामीको नजिक नै नपर्ने